Sidee Yuhuudi u soo Muslimayaa iyaga oo Muslimiintu Sidan Yihiin? – Cabdicasiis Guudcadde
May 24, 2017 June 11, 2017 Guudcadde
Sidee Yuhuudi u soo Muslimayaa iyaga oo Muslimiintu Sidan Yihiin?
W/Q: Najaat An-Nahaari [Af Carabi]
Dad badan ayaa ii soo jeediyay in aan beddelo caqiidadayda Yuhuudinnimada oo aan Islaamka soo galo. Kuwo kale oo bandanna si maalinle ah ayaa ay ii soo nacladaan, oo igu sheegaan in aan ahay gaalad iyo Yuhuudiyad naarta u hoyan doonta.
Saaxiibbaday midkood baa ii soo diray sheeko qurux badan oo dhex martay [Nebi] Maxamed iyo nin Yuhuudi ah oo deriskiisa ahaa dhibaatana ugu filnaa balse Nebigu uu u dulqaadan jiray. Maalin buu ninkii xanuunsaday, Nebiguna waa uu soo booqday. Yuhuudigii baa la yaxyaxay wixii uu samayn jiray iyo akhlaaqda suubban ee Nebiga, markaas ayaa uu soo Muslimay. Markii aan sheekada akhriyay, waxa aan ogaaday in Nebigu lahaa akhlaaq sarraysa oo ka yaabisayba ninkii Yuhuudka ahaa, sababtayna in uu soo Muslimo isaga oo aan xataa Qur’aanka akhriyin. Markaas ayaa aan iswayddiiyay: tolow maxaa Muslimiinta maanta ku qaaday in ay Yuhuudda ugu sandulleeyaan soogelidda diinta Islaamka?
Waxa aan rejaynayaa in aanay idin ka cadhaysiin eray-caddaantaydu: anigu waxa aan rabaa in aan diinta u fahmo qaabka uu u fahmay Yuhuudigaa ku soo Muslimay habdhaqankii Nebiga uun isaga oo aan xataa akhriyin Qur’aanka, waxa aanan isdultaagi doonaa dhawr qodob:
1. Maanta waxa ay Muslimiintu u kala jabsan yihiin mad-habyo, mad-hab kastaana waxa uu ka kale u arkaa “gaal” dilkiisana waa uu bannaysanayaa… Bal haddaba haddii aan anigu –Yuhuudiyad ahaan—doono in aan soo galo Islaamka, ma waxa aan ka soo gelayaa albaabka “Sunniga” mise ka “Shiiciga” mise mad-habyada kale? Mad-habkee ayaa aan se ugu noolaanayaa si nabdoon oo aanay mad-habyada kale dhiiggayga ku xalaalaysanayn. Waxa aan saaxiibadday oo Muslimad ah kula sheekaystay Bayruud, annaga oo ka wada hadlayna baaqyo iigu baaqayay in aan Islaamka soo galo. Waxa aan ogaaday in Muslimiin badani ku soo celceliyaan weedh lama-taabtaan ah oo Nebiga loo nisbeeyo, oo sheegaysa in Muslimiintu u qaybsami doonaan 70 kooxood oo hal mid mooyee intooda kale Ilaahay naarta gelin doono. Markaas ayaa aan saaxiibadday wayddiiyay kooxdaa badbaadaysa magaceeda. Waxa ay ii sheegtay in aanay iyadu garanayn, Muslim kale oo garanayaana aanu jirin, balse koox kastaa ay iyadu isu cumaamadday in iyada loo jeeday.
Markaas ayaa aan iswayddiiyay: tolow haddii qof Yuhuudi ah damco in uu Islaamka soo galo, kooxdee ayaa uu sii marayaa si uu u Muslimo? Wadaadkee ayaa se u dammaanaqaadaya in uu geli doono kooxda saxda ah ee aanu Eebbe cadaabi doonin? Runtii waa khammaar iyo ismiidaamin halis badan!
2. Maanta Muslimiintu waxa ay isku dilaysaa meel kasta, waxa ayna isu biraynayaan qaab foolxun. Bal haddaba sidee ayaa uu Yuhuudi u soo gelayaa Islaamka, isaga oo arkaya in Muslimku walaalkii diinta darteed ku dilayo; iyada oo aydaan maqlin in Yuhuuddu diinta darteed isu layso, taa beddelkeedna ay dawladda Israa’iilba ku dhisan tahay diinta darteed?Waxa aan labo maalmood ka hor akhristay warbixin Qaramada Midoobay ka soo saartay in gudaha Suuriya lagu dilay 80 kun oo Muslim, oo Muslimiin kale (Dawladda iyo Mucaaradka) ay dileen labo gu’ oo keli ah. Waxa kale oo aan daawaday muuqaal laga soo duubay nin Mucaaradka Suuriya ka mid ah oo inta uu qashay askari dawladda ah wadnihiisa cunaya…sidee ayaa ay u dhacaysaa in Muslim uu cuno wadnaha walaalkiisa Muslimka ah?! Sida oo kale waxa aan akhristay tirakoobyo ka soo baxay dagaalkii sokeeye (ee mad-habta ku dhisnaa) ee Ciraaq, oo sheegaya in 280 kun oo Ciraaqiyiin Muslimiin u badan lagu laayay, in yarina ay kiristan ahaayeen.Labadaa tusaale ayaa aan ku joojinayaa, idinka ayaa aanan idin kaga tegayaa in aad ka fekertaan, weelaysaan oo aad iswayddiisaan: sidee ayaa ay Yuhuudi ama Kiristan ugu suuroobaysaa in uu soo galo, oo ku laabsamaado, Islaamka iyada oo xaalkii Muslimiintu sidaa yahay? Waloow aan aad ugu kalsoonahay in waxaas oo dhami aanay raad ku lahayn Islaamka, maaddaama dhammaan diimaha samaawiga ahi ay ku baaqaan nabadgelyo.
3. Markii Nebigu uu dadka ugu baaqayay Islaamka waxa uu u hayay xorriyad, xaqsoor, iyo kamadhnaanta dulmiga, aqoondarrada iyo saboolnimada, sidaa darteed ayaa ay u raaceen. Balse maanta maxay Muslimiintu u hayaan Yuhuuddan ay leeyihiin diinta soo gala?Aynu isu laabxaadhnaanno e, badanka dawladaha Carbeed iyo kuwa Muslimba, waxa buuxdhaafiyay aqoondarro, dulmi, saboolnimo, xuquuqda aadanaha oo lagu tunto, iyo horumarkii iyo awooddii dhaqaale oo laga arradan yahay. Haddii aanay waxaasi jireenna, ma ay qarxeen kacdoonnadii Carbeed. Taa beddelkeeda, dhulalka ay maamulaan Kiristanka iyo Yuhuudda, oo dadka qaar u yaqaannaan “gaalo,” waxa ay magangelyo siiyaan Muslimiin badan oo u soo doonta shaqo ama nolol…wax kale iska daaye xataa dalalkaa ayaa Muslimiinta u soo wershadeeya hoosgashiyada (underwear)…waanan ka cudurdaaranayaa in aanan u dan lahayn jeesjees e ay iga tahay in aynu ka run sheegno waaqica dunidan aynu ku nool nahay.
Waa run oo anigu Yuhuudiyad ayaa aan ahay, balse waa aan ixtiraamaa Islaamka; waxyaabaha ay Muslimiintu ka sheekeeyaanna waxa aan ka dhexhelay wax u qalma in uu aadamaha u noqdo xeer weyn. In aan caqiidadayda ku sii dhegnahay kama dhigna gaalnimo, sida dadka qaar u haystaan. Mid aannu saaxiib nahay ayaaba ii soo diray aayad Qur’aanka ah oo xoojinaysa in aanay dadka diimaha kale aanay wada gaaloobin, oo dhahaysa: “Ma sinna. Ahlu kitaabka waxa ka mid ah bulsho u taagan akhrinta aayadaha Ilaahay dharaar iyo habeenba, iyaga oo sujuudsan!”
Sidaa darteed ayaa aan u bilaabay akhrinta deraasaynta Qur’aanka. Maalin kastana waxa sii bata wareerka i haya, iyo iswayddiintayda: Sidee ayay ummadda Muslimiintu u soo gaadhay xaaladdan [naxdinta leh], iyada oo leh xeer diimeed [Qur’aan] wanaagsan iyo Nebi sare oo qof aan Qur’aankaba akhrin ku sababay in uu ku soo Muslimo habdhaqan yar oo fudud, halka maanta dadka aan Muslimiinta ahayn ku eegayaan Muslimiintii indho baqdin iyo shaki leh?!
Previous Doorashadii Soomaaliya ka dib: Casharro iyo Wax-ku-qaadasho
Next Kulankii Bisadaha